Urhulumente kaRhulumente waseMelika kwiiNkampani ezinkulu
Ngo-2012, urhulumente waseburhulumenteni wase - US -umqeshi omkhulu wesizwe - uhlolwe ukuqesha aba-193,000 abaqeshwa abatsha ukuba bazalise "umsebenzi obalulekileyo" kwimisebenzi karhulumente phantse yonke insimu yomsebenzi.
Ezi zilandelayo ziqhagamshelweyo kwiindawo zewebhu zolwazi zamanqanaba amaninzi, ii - arhente zaseburhulumenteni ze- US kunye ne-arhente zazo.
Ivotelwe enye yeendawo ezi-5 eziphezulu ukuqalisa umsebenzi nge- BusinessWeek .
Njengoko iGosa eliPhezulu lezeMali likaRhulumente waseBurhulumenteni, uNobhala weSebe lezeMali ulawula iqela eliqela labasebenzi abangaphezu kwe-100 000. Abasebenzi boNondyebo bazinikezele ekugcinweni koqoqosho kunye nokunciphisa imisebenzi engekho mthethweni.
ISebe lezoKhuseleko lwaBasebenzi baseKhaya
Abasebenzi bezithuthi zeSebe lezoKhuseleko, basebenza kwiindawo ezahlukeneyo, baxhasa imisebenzi yesebe yaseMelika.
Kuquka izivulo kwi-FBI, ATF, nakwezinye izahlulo zeSebe lezoBulungisa.
Ukuba ufuna i-career ekuncedeni ukulawula izibonelelo zendalo zesizwe ukuze zizuze abantu baseMerika, le yindawo. Isebe langaphakathi lilondolozo lwezinto ezixabisekileyo zendalo kunye nezenkcubeko kunye negosa loxanduva lwayo lokuthembela kumaNdiya aseMerika naseAlaska.
Ukukhangela umsebenzi we-USDA isebenzisa ibhanki yomsebenzi wase-USAJOBS ye-US Office of Personnel Management (OPM). Unokukhangela imisebenzi ngendawo kunye nee-arhente ze-USDA.
Kubandakanya amathuba kwi-National Oceanic kunye ne-Atmospheric Agency (NOAA).
ISebe lezeMisebenzi lilawula iintlobo zeemithetho yomsebenzi waseburhulumenteni kubandakanya ezo ziqinisekisa amalungelo omsebenzi kwiimeko ezikhuselekileyo kunye nokusebenza kakuhle. umvuzo omncinci wehora kunye nokuhlawulwa kwamaxesha angaphezulu; inkululeko ekuchaseni umsebenzi; inshorensi yokungasebenzi; kunye nenkxaso engaphezulu.
IzeMpilo kunye neNkonzo zoLuntu (HHS)
ISebe lezeMpilo laseMelika kunye neeNkonzo zoLuntu (HHS) ligosa eliyinhloko likarhulumente ekukhuseleni impilo kunye nenhlalakahle yabo bonke abantu baseMerika.
Izindlu kunye noPhuhliso lweMihlaba (HUD)
Injongo ye-HUD kukunyusa ulawulo lwabantu basekhaya, ukuxhasa uphuhliso loluntu kunye nokwandisa ukufikelela kwizindlu ezinokuhlawulekayo ezinokuhlawuleka ngaphandle kokucwaswa.
Ehlabathini, ulwandle okanye umoya, i-DOT ilawula iinkqubo ezinkulu zokuthutha. ImiSebenzi ijolise ukhuseleko, ukhuseleko, impilo yezoqoqosho kunye nolawulo lwendalo.
Le yinkqubo ye-automation ye-recruitment system eyenza ukuba izicelo zifake izicelo kwi-intanethi.
I-EdHIRES yiSebe leMfundo leZiko lokuHlala kweeNkcukacha kunye neNkqubo yokuThuthukiswa koLuntu. Abafaki zicelo baya kuba nelokuba balungiselele kwaye bafake izicelo nge-intanethi.
Imiba yeMantshi (VA)
Umsebenzi okhuselekileyo ukhonza amaqhawe esizwe sethu kunzima ukubetha. Ukusebenza kwi-VA ngenye yeendlela ezanelisayo kunye nezobuchule zokuzinikezela okulungileyo phakathi kwakho kwienkonzo zelizwe lakho.
Ukhuseleko lwasekhaya (DHS)
Isebe loKhuseleko loKhuseleko lwaseKhaya kunye nomsebenzi ophuthumayo kukukhokelela umgudu wesizwe wokudibanisa ukukhusela ilizwe nokulondoloza inkululeko.
I-Aeronautics ne-Administration Administration (NASA)
Ngokusekelwe kwizimpendulo ezivela kwabasebenzi abangama-212,000 baseburhulumenteni kunyaka ophelileyo, abasebenzi be-NASA bayaqhubeka nokufaka amanqaku kakuhle baze bathuthele kwindawo yesithathu efanelekileyo yokusebenza phakathi kwamaziko amakhulu aseburhulumenteni.
Ulawulo lweeNational oceanographic and atmospheric Administration (NOAA)
Vula imfihlelo elwandle elunzulu, ukulandelela iziphepho ezinokukhawuleza, usebenze i-satellites yokusingqongileyo kwimozulu, ukutshintshela umlambo weSizwe, uvelise imizekelo ukuze uqikelele imimandla yemozulu, ukhusele kwaye ulondoloze izixhobo zethu zokuphila olwandle.
Ukususela kuma-cyber ukuhlalisa iziphathamandla zikaburhulumente ... ukusuka kwi-mobsters ukuya kubundlobongela obunobundlobongela ... ukusuka kubantwana abaxhambileyo kubabulali ababulalayo, umsebenzi we-FBI ukusikhusela, kunye noluntu, kunye namashishini avela engozini yingozi ejongene nesizwe sethu.
I-Agent Intelligence Agency (CIA)
Iindlela zemisebenzi ziquka abaPhathi beeNkonzo zeeNkcazo zokuba babekho ngaphambili kweengcinga zobuntu. Ngaphezulu, abantu abanezakhono zesayensi, ubunjineli, iteknoloji, ukuhlalutya, iilwimi zangaphandle kunye nokuphathwa kwezikhundla e-United States nakwamanye amazwe.
Ukuba ucinga ukuba i-accounting yiyo yonke into eyenziwa kwi-IRS, qagela kwakhona. Enyanisweni, unako ukusebenzela i-IRS iindlela ezahlukeneyo kwaye unandiphe ixesha lomsebenzi.
Ukuxhatshazwa kweMisa kunye nokuHlala
Indlela Yokukhulisa Amakhadi Amakhadi Asekhoyo
Uhlobo oluthuliweyo: ii-Hollywood Stars ezathi Uncinci kakhulu kwiimfundiso ezinkulu
Kuphi iCaetare ngeCawa?
Inkcazo yoMsebenzi kwiFizikiki
Izinto ezininzi ngokuqhelekileyo ezisekhohlo ngaphakathi kwiBhodi emva kokuPiliswa
Ngaba iCaffeine ifuthe Ukutya kweKafesi kunye neClala?
I-Molality and Concentration of Solution Chemical